प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बारे यथार्थ जानकारी लुकाउने प्रयास ! - Subhay Postप्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बारे यथार्थ जानकारी लुकाउने प्रयास ! - Subhay Post
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बारे यथार्थ जानकारी लुकाउने प्रयास !
सुभाय् संवाददाताOctober 30, 2019 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौँ/स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि काठमाडौं टोखारोडस्स्थित ग्राण्डी हस्पिटलमा भर्ना गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलिको स्वास्थ्य स्थिती बारे उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले उहाँ नियमित चेकजाँचको लागि हस्पिटल भर्ना भएको र आज कातिक १४ गते विहिबारसम्ममा उहाँलाई डिस्चार्ज गरिने कुरा उल्लेख गरेर उहाँको स्वास्थ्यस्थिति बारे जानकारी बाहिर ल्याएको छ ।ग्राडी हस्पितलका नेफ्रोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट बिभागका प्रमुख डा दिव्या सिंह शाह र मेडिकल डाइरेक्टर चक्रराज पाण्डेको हस्ताक्षर रहेको उक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलिको स्वास्थ्य स्थिती बारे उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
तर कान्तिपुर अनलाईनले उहाँको स्वास्थ्यस्थित बारे स्वास्थ्य अवस्था बारे यथार्थ जानकारी लुकाउने प्रयास गरेको र उहाँको ‘डायलाइसिस’ गरिएको भनी समाचार प्रकाशन गरेको छ । साथै अनलाईन खबरले पनि उहाँको ‘डायलाइसिस’ गरिएको र केहि दिन हस्पिटलमै बसी उपचार गराउनुपर्ने खबर प्रकाशन गरेको थियो ।
उसले लेखेको छ ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौलाको डायलासिस गरिएको छ ।भर्ना भएकै दिन अर्थात बुधबार साँझ नै डायलासिस गरिएको हो । स्वास्थ्य चेकजाँचको रिपोर्टका आधारमा आकस्मिक डायलासिस गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
यसैगरी कान्तिपुरको अनलाईन संस्करणले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘डायलाइसिस’ गरियो, स्वास्थ्य अवस्था बारे यथार्थ जानकारी लुकाउने प्रयास भन्ने सिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अस्पतालमा ‘डायलाइसिस’ गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार बिहान नियमित परीक्षणका लागि लगिएको बताइए पनि आईसीयूमा राखेर गोप्य रूपमा डायलाइसिस गरिएको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई जानकारी दियो ।